विज्ञको काम उजुरीमा चासो राख्ने हो ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विज्ञले आफ्नो क्षेत्र जे हो त्यो मात्र गर्ने हो, तर आयोगमा राखिएका सञ्चारविज्ञ शरद अधिकारीले उजुरीका पक्ष वा विपक्षसँग भेट्ने वा भेटाउने काम गरेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । सञ्चारविज्ञ अधिकारीले विवादास्पद व्यापारी सुहृद घिमिरेको उजुरीबारे आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तसँग पनि लबिङ गरेको आयोगभित्रका महाशाखा प्रमुखसम्मलाई जानकारी छ । सुहृद घिमिरेलाई राम्रो भनिरहँदा नराम्रा चाहिँ को हुन् त भन्ने अहम् प्रश्न उनका बारेमा थाहा पाउनेहरूले एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ । तर अधिकारीले उनलाई राम्रो मानिस भनेर पटकपटक उनको पैरवी गरिरहेको सूचना हामीले पाएका छौं । अख्तियारले सुरु गरेको सेवाग्राहीले घुस दिएको भिडियो लिने ‘¥यापिड अप्रेसन’ मा परेकाहरूलाई पनि फसायो भनेर उल्टै आयोगकै विरुद्ध बोल्ने कामसमेत उनीबाट हुँदै आएको विश्वस्त स्रोतले बतायो ।
सञ्चारविज्ञ अधिकारीबाट राम्रा भनिएका सुहृद घिमिरे कस्ता हुन् त ? उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रतिआना ५० हजारमै किनेको पाइएको छ । घिमिरेले आफ्नी सासूआमा इन्दु शर्माका नाममा खरिद गरिदिएको करिब १३ रोपनी जग्गामध्ये दुई कित्ता जग्गाको खरिदबिक्री लिखतबाट यसको पुष्टि भएको छ । यो जग्गाबाहेक उनको र परिवारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको उत्तरपूर्व गैरीधारासँगै सात रोपनी, तीनकुनेका चियाको सोरुम भएको ठाउँमा पाँच रोपनी, बालुवाटारमा अशोक राणासँग मुद्दा परेको ६ रोपनीसहित ५० रोपनी जग्गा छ । जबकि, काठमाडौं उपत्यकामा एक परिवारको नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भए हदबन्दी लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हदबन्दीभन्दा दोब्बर क्षेत्रफल जग्गा भएका घिमिरेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गाडी सोरुमदेखि मर्मत केन्द्रका लागि कौडीको मूल्यमा जग्गा भाडामा लिएका छन् । नेपाल ब्याट्री कम्पनीको नाममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भाडामा दिएको जग्गा पनि सुहृद घिमिरेले नै ओगेटका मात्र होइन, कब्जा नै गरी आफ्नो नाममा ल्याउन साजिस गरिरहेका छन् । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडा गत वर्ष बढाउन खोज्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई घुस खुवाएर भाडा नबढाउन निर्देशन गराए । मातृका यादवका त्यतिखेरका पीए सन्तोष विष्टले बालाजु औद्योेगिक क्षेत्रको कार्यालयलाई तत्काललाई भाडा नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीका स्वकीय सचिव विष्टले गैरकानुनी रूपमा दिएको निर्देशनका कारण एक वर्षअघि बढाउन खोजेको भाडासमेत सुहृद घिमिरेहरूको घुसको शक्तिले रोकिन पुगेको छ । जसका कारण बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई वार्षिक करोडौं घाटा भएको छ ।
शैक्षिक माफियाका रूपमा चिनिएका उमेश श्रेष्ठले कर्मनासा खोला अतिक्रमण गरी १ सय रोपनीभन्दा बढी हात्तीवनको जग्गा लिटिल एन्जल्स स्कुलभित्र हालेको विषयमा भइरहेको छानबिनमा पनि उनले चासो राखेको समाचार बुधबारले गत अंकमै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
अख्तियार स्रोतको प्रश्न छ, ‘आयोगका सञ्चारविज्ञले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दिशामा गरेका कामहरूको प्रचारप्रसार गर्न छाडेर उजुरीमा चलखेल गर्ने, तस्कर र ठग छुटाउनेदेखि अख्तियारका उजुरी मिलाउने काममा सक्रिय बिचौलिया नाम्गेल शेर्पासँग अधिकारीको बाक्लो उठबसले गर्ने काम गरेपछि त्यसले के संकेत गर्दछ ?’
प्रवक्ता खतिवडा सूचना लुकाउन तल्लीन
किन बिच्किए गजुरेल ?
भ्रष्टाचार गर्ने पीए डाँँडा कटाइए
सुवासको नाम सुन्दा किन रन्किए प्रधानमन्त्री ?